Knowledge – Cele Snap
တနင်္ဂနွေသား/ သမီးများက အပေါင်းအသင်း မက်ပေမယ့်လည်း ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ အကြောင်း….
ချစ်​သူအ​ပေါ် အနိုင်​ယူ လိုတဲ့ စိတ် ​ရှိတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်ရဲ့ အလိုကျ အတိုင်း ဖြစ်​​စေချင်​တဲ့သူမျိုး။ အရမ်းလည်း ချစ်​တတ် ​ကြတယ် …။တနင်္ဂ​နွေ​ သားသမီး​တွေက အရမ်းကြီး မထူးဆန်း​ပေမယ့် အခြားလူတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ စရိုက်​​တွေကို …
February 5, 2021 By Ju Ry Knowledge
သင်တို့ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ပေါ်မှာ လိပ်ပြာတွေလာနားပြီဆိုရင် သတိထားရမည့်အကြောင်းအရင်းများ….
အရောင်အဆင်းအမျိုးမျိုးရှိပြီး ချစ်စရာအသွင်ရှိကြတဲ့ လိပ်ပြာလေးတွေ ပန်းလေးတွေပေါ်ဝဲပျံနေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါ မကြည်နူးတဲ့လူရယ်လို့မရှိပါဘူး။ လူတော်တော်များများကလိပ်ပြာတွေဟာ ပန်းဝတ်ရည်ကိုသာစုပ်ယူစားသုံးတယ်လို့သိကြတာပါ။ အမှန်တော့ လိပ်ပြာမဖြစ်ခင် ခူကောင်ဘဝမှာ သစ်ပင်ကအရွက်တွေကိုစားပြီးကြီးပြင်းခဲ့ကြပြီး လိပ်ပြာဘဝမှာ ပုရွက်ဆိတ်ငယ်တွေ ပိုးမွှားတွေနဲ့ ပုပ်သိုးဆွေးမြေ့နေတဲ့တိရိစ္ဆာန် တွေ ၊ အသီးအရွက်တွေကိုသာမက တိရိစ္ဆာန် တွေရဲ့မစင်အပေါ်မှာပါ …
February 4, 2021 By Ju Ry Knowledge
တေးရေး၊တေးဆို တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်ဆိုတေး ကတော့ “မီးအိမ်ရှင်” သီချင်းလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာ စတင် နေရာယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အသံချိုချို အေးအေးလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဆိုတေးက အချစ်သီချင်းတွေနဲ့ အလွမ်း သီချင်းကောင်းလေးတွေကို ဖန်တီးတဲ့ …
ပရိသတ်တွေအရမ်းချစ်ကြတဲ့ ဝါရင့်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး သက်မွန်မြင့်ကတော့ သူမကို အရမ်းချစ်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရယ်၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးနဲ့ သမီးလေးရယ်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ကံကောင်းမှုတွေရှိတဲ့ သက်မွန်မြင့်က သားသမီးတွေ ပိုင်ဆိုင်လာချိန်မှာလည်း သူမအပေါ် …
ညီမတစ်ဝမ်းကွဲ ဖြစ်သူ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်နဲ့ အခမ်းအနားတစ်ခုကို ရှားရှားပါးပါးအတူတူတက်မယ့်ပွဲအတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှာနေတဲ့ ဖွေးဖွေး
ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ မင်းသမီး နှစ်စ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖွေးဖွေးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့က တစ်ရက်ကြီးတစ်ရက်ငယ်သာကွာတဲ့ ညီအစ်မ တစ်ဝမ်းကွဲတွေဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ…။ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ကိုယ်စီရရှိနေတဲ့ ဖွေးဖွေးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့ ညီအစ်မက အကယ်ဒမီဆုကြီးတွေကိုလည်း ရရှိထားပြီး နိုင်ငံခြားက …
လူကြီးစုံရာနဲ့ တရားသူကြီးရှေ့မှောက်မှာ မင်္ဂလာလက်မှတ်ထိုး လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့ နိုင်းဝမ်းတို့ချစ်သူနှစ်ဦး
Hip Hop အဆိုတော် နိုင်းဝမ်းကတော့ သူအရမ်းချစ်ရတဲ့ သူ့ချစ်သူမိန်းကလေးနဲ့ သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အချစ်ရေးတစ်ခု (၁၁) နှစ်ကျော်တိုင် တည်ဆောက်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော် နိုင်းဝမ်းကတော့ သူ့ရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကလည်း နိုင်းဝမ်းတို့ …
မိတ်ကပ် လင်းလင်းကတော့ သူရဲ့လိုက်ဖက်လွန်းတဲ့ချစ်သူလေးကို တရားဝင်အလင်းပြလိုက်ပြီနော်..
မင်္ဂလာပာ ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ မိတ်ကပ်လင်းလင်းကတော့ အနုပညာလော ကမှာသာမက ပရိသတ်တွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ မိတ်ကပ်ဖန်တီးရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အမြဲ အနေအထိုင်သိမ်မွေ့လှတဲ့ လင်းလင်းကတော့ အမြဲ ပျော်ပျော်နေတတ်ကာ ပွင့်လင်းတဲ့ အပြောလေးတွေနဲ့ ပရိသတ် အချစ်ကို သိမ်းပိုက်ထားသူလေးလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပာတယ်..။ မိတ်ကပ် …